Waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaato umulisada (Alytes obstetricans)
Inicio >> Dabeecadda >> Umulisada toad (Alytes umulisada)
Furaha amphibians-ka ee jardiinooyinka dabiiciga ah ee SpainDownload
Oo halkan waxaa ku yaal qoraallo ka mid ah waxyaabihii aan ka ogaaday kuleylka umulisada.
Waa a toad yar, oo ka yar 5 cm. Iyadoo a cimriga 5 sano taas oo aad u yar marka la fiiriyo toads-ka guud (Bufo bufo) wuxuu noolaan karaa ilaa 30 sano.
Indhaha dambe, oo leh iris dahab ah iyo arday taagan. Muuqaalka Chubby, maqaarka badarka leh burooyinka.
Ma aha dhul, ragga waxay wadaagi karaan hoyga dhagxaanta, dillaacyada, iwm.. Waxayna ku tartamayaan midba midka kale cod ahaan.
Sawirkan waxaan sifiican ugu qadarin karnaa kan baalal-saddexaad ama xuub nuujin ah.
Sida loo aqoonsado
Habka ugu horeeya wuxuu la socdaa furaha aan kor uga tagnay.
Hab kale oo lagu garto iyaga ayaa ah iyada oo la heesayo. Aad ayey u weyn tahay, lama huraan, sida cows yar oo ay soo saareen ragga, waxay umuuqataa guumays yar. Illaa iyo hadda, in kasta oo aan dhegeysto habeenno badan oo xagaaga ah, haddana ma aan aqoon xayawaan ay leeyihiin. Waxaan ku guuleystay inaan duubo. Halkan ayaad ka dhagaysan kartaa.
Hoyga iyo aagga qaybinta
Waxaan ka heli karnaa deegaanno badan oo kala duwan, laga soo bilaabo buuraha, kaymaha iyo jiinka webiga illaa magaalooyinka.
Dhamaan dalal kala duwan (Switzerland, Belgium, Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska, Luxembourg, France iyo Jasiiradda Iberian)
Maxay cunaan? Quudinta
Sida noocyada kale ee anurans Waxay ku quudiyaan caaro, arthropods iyo cayayaanka yaryar, Gooryaanka, dirxiga, lamid ah, dixiriga dhulka, aboor, IWM
Iyagu maahan xayawaan gurijoog ah. Laakiin mararka qaarkood waxaan ka badbaadinnaa culeysyada balliyada balliga ee qallajinaya. Waxaan jecelahay inay gabdhuhu daryeelaan oo ay u kuur galaan isbedelka.
Taadleyaasha ama dirxigu waxay cunaan walxaha dhirta iyo hilibka ay ka helaan biyaha. Haddii ay tahay inaad si ku meel gaar ah u quudiso waxaad ku samayn kartaa cunnada kalluunka.
Kadib roobabkii ugu horreeyay ee Sebtember ayaa yimaada amplexus (taas oo ah habka isweheshiga ee amphibians anuran)Waxaa lagu soo saaraa dhulka waana mid qarsoodi ah, iyada oo la tixgelinayo in ragga ay yihiin ukunta. Labku wuxuu kiciyaa dumarka si ay u siidaayaan xadhig ukumo ah oo ay bacrimiyaan labku kuna qabsadaan lugaha dambe halkaasoo uu ku qaadan doono ilaa 1 bilood
Weli ma aanan awoodin inaan sawiro, waxaan rajeynayaa inaan sawiro fiican ka qaadi karo amplexus dhawaan.
Noocyada ama noocyada toads ummulisada
Waxaa jira 5 nooc oo ah toads ummuliso:
Umulisada guud ee umulisadaAlytes dhalmada)
Umulisada Iberia toad (Alytes cisternasii)
Umulisada Balearic ama tore-ka (Alytes muletensis)
Umulisada Betic umuliso (Alytes dickhilleni)
Umulisada Maghreb toad (Alytes maurus)
4-ta ugu horeysa waxaa laga heli karaa Spain iyo Valencia, kaliya umulisada guud ee umulisada ayaa nool. Markaa ma jiro jahwareer u dhexeeya noocyada markii aan helno mid.
Iyo xilliga qaboobaha?
Waxaan marar badan isweydiiyay waxa ay rahyada iyo toku sameeyaan xilliga jiilaalka.
Hagaag, toads iyo anurans bruman. Burburku waa nooc ka mid ah hurdo la'aanta amphibians iyo xamaarato. Waxaa looga tagaa sidii iyagoo kufiifaya biyaha hoostooda, in kastoo ay tahay inay sii wadaan cunida iyo cabitaanka waqti ka waqti. Waxaan uga tagayaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan hibernation iyo brumation in this article.
Ilaha iyo tixraacyada
Soo celinta buug hore
U shid dabshid Jack London
2 Sida loo aqoonsado
3 Hoyga iyo aagga qaybinta
4 Maxay cunaan? Quudinta
6 Noocyada ama noocyada toads ummulisada
7 Iyo xilliga qaboobaha?
8 Ilaha iyo tixraacyada